दन्त उपकरण, सिरेमिक भट्टा, दन्त झूटा दाँत - Zetin
मिनी SINTERING फर्नेस
पोर्सिलेन फर्नेस भिडियो
Sintering फर्नेस भिडियो
स्पिड / फास्ट SINTERING फर्नेस
SILICONIT SINTERING फर्नेस
कुर्सी SINTERING फर्नेस
झेंग्झौ Zetin विद्युत उपकरण कं, लिमिटेड
दन्त उपकरणको ढुवानी
विज्ञान र प्रविधि को विकासको साथ, यातायात को मोड धेरै सुधार गरिएको छ। हामी ढुवानीको आधारमा यातायात मोड रोज्न सक्छौं। यद्यपि कोरोनाभाइरस उपन्यासबाट प्रभावित भएर यातायातका धेरै मोडहरू प्रतिबन्धित गरिएका छन्।
कोरोना भाइरसको बिरूद्ध, सँगै!
हामी सबैलाई थाहा भएकै छ, केहि केहि महिनामा मानव कोरोना भाइरसको अल्पविरामबाट पीडित छ। भाइरसको कारण अत्यधिक ट्रान्समिसेबल छ, धेरै देशहरू तालाबन्दीमा छन्। गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको बाबजुद हामी अझै आवश्यक ग्राहकहरूलाई तुरुन्तै मेशीनहरू उपलब्ध गराउन जोड दिन्छौं। वर्तमानमा, हामीसँग ...
1 को बन्द क्रूसिबल प्रयोग गर्नुहोस्। 2. पूर्ण स्वचालित सञ्चालन कार्यक्रम, प्रभावकारी मानव हस्तक्षेप बिना प्रदूषण चरण जोगिन सक्छौं जो सेट गर्नुहोस्। 3. अनुकूलित र ताप तत्व छील गर्न र थप प्रभावकारी zirconia सुरक्षा सजिलो छैन भनेर ताप तत्व अनुकूलन।4प्रयोग ...